कमेडियन कपिल शर्मासँग किन रिसाए यी चर्चित सेलेब्रेटीहरू? – Makalu News » कमेडियन कपिल शर्मासँग किन रिसाए यी चर्चित सेलेब्रेटीहरू?
त्यसमा उनले कपिलको कार्यक्रम ‘भल्गर’ (अश्लील)भएकाले जान नचाएको उल्लेख गरेका थिए।
सन् २०१७ मा एकपटक अभिनेता अजय देवगन पनि कपिलसँग खुबै रिसाएका थिए। कपिल शोका लागि अजय देवगन ‘बादशाहो’ फिल्मको टोलीसँगै सुटिङ गर्न पुगेका थिए। तर कपिल आइदिएनन्।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सन् २०१५ मा अभिनेत्री दिपाली सायदले पनि कपिलले मदिराको नशामा दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरेकी थिइन्